LG Watch Style, kani waa saacadda cusub ee LG | Androidsis
Alfonso ee Miraha | | La cusboonaysiiyay 07/04/2017 22:46 | LG, MWC
Waxay ahayd sir furan in LG waxay soo bandhigi laheyd LG G6 marka lagu daro labo saacadood oo cusub oo laga helay MWC. Qiyaasta xanta ayaa si cad u cadeysay ujeedooyinka soo saaraha Kuuriya oo ahaa mid ka mid ah guuleystayaasha cadadka daabacadan ee World World Congress 2017 oo ay weheliyaan Huawei iyo P10 cusub.
El LG G6 waxay iga tagtay dareenno aad u wanaagsan markii aan fursad u helay inaan isku dayo, hadda waa markiisa Nooca LG Watch, smartwatch leh Android Wear 2.0 oo leh faahfaahin aad u xiiso badan.
1 LG waxay ku sharraxeysaa naqshad fudud oo loogu talagalay LG Watch Style
2 Astaamaha farsamada ee LG Watch Style
LG waxay ku sharraxeysaa naqshad fudud oo loogu talagalay LG Watch Style
Layaab la'aan, LG Watch Style wuxuu leeyahay a wareega wareega. Inta badan soosaarayaashu waxay doorteen shaashad noocan ah, iyagoo ka tegaya naqshad qaabeedka lebbiska casriga ah.
Jirka LG Watch Style ayaa laga sameeyay 316L aluminium aan fiicnayn, siinta aaladda xoogga weyn. Dabcan, qeybta dambe ee saacaddu waxay ka sameysan tahay caag. Si loo yiraahdo taabashadu waa wax aad u wanaagsan oo giraangirta, oo ku taal dhinaca midig ee saacadda, waxay bixisaa waddo qumman si loogu oggolaado socodka dareeraha iyada oo loo marayo menusyada kala duwan ee saacadda.
Sida magaceedaba ka muuqata, saacaddu waa aalad leh qaab aad u gaar ah. A smartwatch yar oo si fiican ula qabsada curcuraha khafiifka ah, taas oo ka dhigaysa xulasho aad muhiim ugu ah dumarka.
Mid ka mid ah dhibaatooyinka haysta smartwatches-ka badankood waxay la yimaadaan cabirkooda: iyagoo aad u ballaaran ma aysan si fiican ugu habboonayn curcurada khafiifka ah, laakiin qaabkaani wuxuu u xaliyaa dhibaatadan mahadnaqa jirkeeda is haystakaliya 10.8mm qaro weyn).
Ogsoonow in LG Watch Style, oo la yimaada shahaado IP67 Si loo siiyo aaladda caabbinta boodhka iyo biyaha, waxay leedahay nidaam caadi ah oo xarkaha ah oo noo oggolaanaya inaan beddelno si aan u dooranno midka aan aadka u jecel nahay.
Markii aan arkay saacadda miiska saaran, waxaan dareemay inay ahayd aalad rakhiis ah, gaar ahaan haddii aan tixgelinno culeyskeeda 46 garaam. Laakiin Ka dib markii aan gashaday, waa inaan dhahaa waxay runtii ku fiicantahay curcurka, iyadoo siineysa dareen adag oo adag.
Astaamaha farsamada ee LG Watch Style
Cabirka: 42,3 x 45,7 x 10,8 mm
Batariga cabirkiisa: 240 mAh
Shaashadda: 1,2 inji oo leh teknoolojiyadda POLED iyo xalka 360 x 360 pixels (299 dpi)
Nooca Android: Android Wear 2.0
Xusuusta Gudaha: 4 GB oo keyd ah
Processor: Qualcomm Snapdragon Gasho 2100 oo ah 1.2 GHz
Dareemayaal: Accelerometer, gyroscope iyo shidma iftiinka aaladda.
Isku xirnaanta: Wi-Fi 802.11 b, g, n iyo Bluetooth 4.2 LE.
Marka la eego astaamaha farsamada, waxaa na horyaalla saacad u oggolaan doonta nooca ugu dambeeya ee nidaamka qalliinka ee Google ee weararada loo isticmaali karo si habsami leh oo dheecaan leh. Waxaan tijaabinayay saacada meesha taagantahay mudo dheer runtuna waxay tahay inay sifiican u socoto, taas oo kuu ogolaaneysa inaad ku dhex marto codsiyada kala duwan dhib la'aan. Haa, lGiraangirta dhinaceeda waxay noqoneysaa lama huraan haddii aan rabno inaan iska ilaalino in shaashadda ay ku dhammaato iyadoo lagu calaamadeeyay boqolaal faro.
La soo bandhig farsamada P - OLED iyo xalka 360 x 360 pixels waxay bixisaa midabyo aad u muuqda oo madow qoto dheer leh, wax laga filayo shaashaddaas oo kale. Shaashadu waxay noo oggolaaneysaa inaan aqrino dukumiinti kasta dhib la'aan. Waa inaan ku tijaabino bannaanka si aan u aragno sida saacadda cusub ee LG ay ugu dhaqanto xaaladaha dhalaalaya, laakiin qaybta shaashadda ayaa u muuqata mid aad u wanaagsan guud ahaan.
LG Watch Style wuxuu la yimid Android Wear 2.0 markaa waxaan u adeegsan karnaa codsi kasta dhib la'aan. Xaqiiqda ah in saacadu aysan laheyn dareemayaasha garaaca wadnaha waxay dhibco badan ka fogaysaa aaladda suuqa ku dhaceysa wax yar ka dib waxay noqon doontaa kudhowaad 250 euro.
Daawasho aad u xiiso badan oo si cad loogu bartilmaameedsaday kuwa raadinaya yar oo raaxo leh si ay u xirtaan smartwatch.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » LG » LG Watch Style, kani waa saacadda cusub ee LG